पेटको बोसो घटाउन यस्तो गर्नुहोस् !
हिमालय खबर , १ श्रावण २०७२, शुक्रबार - पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न ग ...
हिमालय खबर , २३ असार २०७२, बुधबार - १. मिर्गौला फेल हुन सक्छ दैनिक दुईपटकभन्दा बढी सोडा सेवन गर्नेहरुमा मिर्गौला फेल हुने खतरा नगर्नेमा भन्दा उच्च हुन्छ । सामान्य सोडाभन्दा कर्न सिरपको उच्च फ्रुक्टोजद्वारा गुलियो बनाइएको सो ...
हिमालय खबर , २२ असार २०७२, मंगलवार - क्षेत्री एण्ड एशोसिएटस् न्युयोर्कका यटर्नी बासु फुलारा फेसबुक: http://www.facebook.com/bashu.phulara फोन: (७१८) ४४०-५७५४ इमेल: bp@chhetrylaw.com डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण ...
हिमालय खबर , ८ असार २०७२, मंगलवार - धेरैजसो मानिसलाई पेटको बोसो कसरी घटाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । केही खाद्यपदार्थ यस्ता हुन्छन्, जसले सजिलै पेटको बोसो कम गर्छन् । यस्ता खाद्यपदार्थले मेटाबोलिजम बढाएर शरीरबाट बोसो निकाल्ने हर्मोन सक्र ...
हिमालय खबर , २८ जेष्ठ २०७२, बिहीबार - धेरैे लसुनलाई खाना स्वादिस्ट बनाउने मसला ठान्छन् । यस उपादेयता यति मात्रै ठान्नु लसुनप्रतिको ठूलो अन्याय हो । मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायी गुण हुन्छन् लसुनसँग । कति प्रकारका रोगब्य ...
हिमालय खबर , १८ जेष्ठ २०७२, सोमबार - यदि रक्तचाप १४०/९० को वरिपरि छ र कहिलेकाँही १५०/१०० सम्म पनि पुग्छ भने यस्तो अवस्थामा औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर रक्तचाप घटाउन सकिन्छ ...